Only website's news are shownBizKhabar Online » BizKhabar Online - newsare.net
Displayed only the news from the website BizKhabar Online » BizKhabar Online
भारतले कहिले सीमाक्षेत्रको नेपाली भूमि कब्जा गर्ने गरेको छ त कहिले अनधिकृत तवरले सिमानामा बाँध ब�
भारतले कहिले सीमाक्षेत्रको नेपाली भूमि कब्जा गर्ने गरेको छ त कहिले अनधिकृत तवरले सिमानामा बाँध बनाएर नेपाली जमीनलाई डुबाउने गरेको छ । यति मात्र होइन, नेपाल सरकारको अनुमति नै नलिई भारतीय सीमारक्षक बलका बर्दीधारी प्रहरी नेपालको भित्री भागसम्म घुसेका कैयौं घटना छन् । लामो समयदेखि देखा परिरहेको यस्तो मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध नेपाली जनता आन्दोलित रहँदै आएका हुन् । यस्तो आन्दोलनको आह्वान र नेतृत्व गर्नेमा खासगरी नेपालका वामपन्थी दलहरू नै हुने गर्छन् । यसपालि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका विषयमा भने नेपालका सबै दल एकबद्ध भएर सो नेपाली भूमिबाट भारत पक्षलाई हटाउन विरोधस्वरुप… The post भारतले बुझे हुन्छ नेपाल कसैको छोटे भाइ होईन : नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको अन्तर्वार्ता appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र २५ लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटकको नेपाल भ्रमण गराउने लक्ष्य ल�
काठमाडौं । सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र २५ लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटकको नेपाल भ्रमण गराउने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवटाले आज संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका आर्थिक सर्वेक्षण २०७६-७७ मा सन् २०२५ सम्म २५ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याएर ८ लाख ९८ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको हो । सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्षको घोषणा गरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रहेकामा कोभिड–१९ को महामारीको कारण भ्रमण वर्ष स्थगन भइसकेको छ । नेपालका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जैविक एवं मानव निर्मित सम्पदाहरुको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्दै नेपाललाई… The post आगामी ५ वर्षमा २५ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य, होला त पुरा ? appeared first on Bizkhabar Online.
कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न नेपाललाई एडीबीको साथ, दियो ३ अर्ब सहुलियत ऋण
काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालमा कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नका लागि ३ अर्ब सहुलियत
काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालमा कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नका लागि ३ अर्ब सहुलियत ऋण दिएको छ । मंगलबार उक्त ऋण स्विकृत भएको हो । यसमार्फत नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउनमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ । नेपालका लागि विभिन्न समयमा ऋण दिँदै आएको र यसपालीको ऋण भने कोभीड १९ महामारीको अन्त्यका लागि र यसले प्रभाव पारेको अर्थतन्त्रका लागि पनि सहयोगी हुने एडीबीका अध्यक्ष मासात्सुगु आसाकावाले बताए । गत १३ अप्रिलमा एशियाली विकास बैंकले कोरोना भाईरस प्रभावित राष्ट्का लागि भनेर २० बिलियन डलरको प्याकेज घोषणा गरेको थियो । कोरोना नियन्त्रणका… The post कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न नेपाललाई एडीबीको साथ, दियो ३ अर्ब सहुलियत ऋण appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको लागि कुनै पनि नयाँ कार्य�
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको लागि कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नल्याउने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा नयाँ काक्रम नहुने तर निरन्तर भईरहेका कार्यक्रमलाई पूर्ण सम्पन्न गर्ने गरि तयारी भईरहेको जानकारी दिए छ । चालु आवमा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पाएको भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई लकडाउन अघि योजना आयोगबाट १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त भएको थियो । उक्त सिलिङअनुसार बजेट माग गरेको भए पनि यो वर्ष बजेटमा संकुचन आउने भएकोले मागअनुसार रकम पाउन नसकिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका… The post आगामी बजेटमा भौतिक पूर्वाधार : छैनन् नयाँ कार्यक्रम, पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता appeared first on Bizkhabar Online.
एकै दिन ९० जनामा संक्रमण भेटिएसँगै ४६ जिल्लामा फैलियाे काेराेना, संक्रमित संख्या ७७२ पुग्याे
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ९० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ९० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका जानकारी अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा उक्त संख्यामा संक्रमित देखिएको हो । गत २४ घण्टामा गरिएको ३७८२ पिसिआर परीक्षणमा ९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता विकाश देबकोटाले जानकारी दिएका छन । योसँगै संक्रमितको संख्या ७७२ जना पुगेको छ । त्यस्तै डिस्चार्जहुनेको संख्या १५५ जना पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ४३ जना उपचार पछि निको भएर घर फर्केका छन । जो ७ देखि ५३ बर्ष उमेरका रहेका छन । जस मध्ये… The post एकै दिन ९० जनामा संक्रमण भेटिएसँगै ४६ जिल्लामा फैलियाे काेराेना, संक्रमित संख्या ७७२ पुग्याे appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई न्युनिकरण गर्न सस्थागत निक्षेपर्ताका लागि तोकिने ब्�
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई न्युनिकरण गर्न सस्थागत निक्षेपर्ताका लागि तोकिने ब्याजदरलाई थप व्यस्थित गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाबढमा संस्थागत निक्षेप स्वीकार गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । अबका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्ने संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै माथिल्लो सिमानै तोक्न लागिएको जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यस अघि पनि राष्ट्र बैंकले बढाबढ ब्याजदरमा संस्थागत निक्षेप स्वीकार गर्दा प्रकाशित दरमा १ प्रतिशतभन्दा बढी जान नपाउने व्यवस्था गरेको… The post मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षाः संस्थागत निक्षेपको ब्याजमा सिमा तोकिने, बैंकका ब्राञ्चलाई समेत पुनर्कर्जाको टार्गेट appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्ष आर्थिक वृद्धिदर २ दशमल ३ प्रतिशत हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज ख�
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्ष आर्थिक वृद्धिदर २ दशमल ३ प्रतिशत हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक बर्ष २०७६ ७७ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् । उनले अघिल्ला बर्षहरुमा ६ देखि ७ प्रतिशतले वृद्धि हुने आर्थिक वृद्धि यो बर्ष कोरोनाको महामारीले निम्त्याएको संकुचन अर्थतन्त्रले यस्तो भएको बताएका हुन । The post यो बर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ३ प्रतिशतमात्रै appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । निर्माण सामाग्री र ढुवानीमा कृत्रिम रुपमा मिलेमतोमा अत्याधिक मुल्यवृद्धि गरिएको प्र�
काठमाडौं । निर्माण सामाग्री र ढुवानीमा कृत्रिम रुपमा मिलेमतोमा अत्याधिक मुल्यवृद्धि गरिएको प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले मंगलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाको कहरबीच सरकारी निर्णय बमोजिम निर्माण कार्यमा खटिएका व्यवसायीहरु कालोबजारीले गर्दा थप मारमा परेको उल्लेख गरेका छन् । लकडाउन अघि भन्दा सिमेन्ट (प्रति बोरा) मा रु ८० देखि रु १२० र रड ९प्रति केजी० मा रु। १० देखि रु १५ सम्म मुल्यवृद्धि भएको जानकारी महासंघलाई प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यस्तै निर्माण सामग्री ढुवानीमा पनि लकडाउन अगाडिको… The post कोरोना कहरबीच निर्माण सामाग्री र ढुवानीमा कालोबजारी, निर्माण व्यवसायी थप मारमा appeared first on Bizkhabar Online.
आज लकडाउनको ६४ औं दिन : सबैको एउटै प्रश्न-सरकार लकडाउन कहिले खुल्छ ?
काठमाडौं । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलन नदिन नेपाल सरक�
काठमाडौं । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलन नदिन नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउन (बन्दाबन्दी)को आज ६४ औं दिन हो । अहिले सरकारले जारी गरेको सातौं चरणको लकडाउन चलिरहेकोे छ । सरकारले आगामी जेठ २० सम्मका लागि सातौ चरणको लकडाउन लागू गरेको छ । सरकारले नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै पहिलोपटक चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ बिहान ६ बजेसम्म लकडाउन घोषणा गरेको थियो । यस्तै दोस्रो चरणमा लकडाउनको अवधि थप गर्दै चैत २५ सम्म बढाइएको थियो । यस्तै सरकारले तेस्रो चरणमा चैत्र २६… The post आज लकडाउनको ६४ औं दिन : सबैको एउटै प्रश्न-सरकार लकडाउन कहिले खुल्छ ? appeared first on Bizkhabar Online.
आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुदै छ । दिउँसो १ बजे बस्ने बैठक
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुदै छ । दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने संसद सचिवालयको कार्यसूची छ । आर्थिक सर्वेक्षण पेश भएको तेस्रो दिन अर्थात जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट संसदमा प्रस्तुत हुनेछ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था संविधानमा नै रहेको छ । The post आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै appeared first on Bizkhabar Online.
चुक्ता पुँजी चारगुणा बढेको र आर्थिक गतिविधिहरु त्यस अनुरुप विस्तार हुन नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय �
चुक्ता पुँजी चारगुणा बढेको र आर्थिक गतिविधिहरु त्यस अनुरुप विस्तार हुन नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कारोबारमा विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । प्रतिफल निकै घटेको अवस्था थियो । बहुमतको सरकार बनेको र राजनीतिक स्थीरता हुने आशामा लगानी विस्तारको अपेक्षा हामी सबैले गरिरहेका थियौं । तर फेरि अकस्मात कोरोना महामारीको त्रासले विश्व नै स्तब्ध भएको छ । यसमा नेपाल भने फरक उदाहरण बन्न सक्ने कुरै थिएन । लकडाउनपछि त समग्र आर्थिक गतिविधिहरु नै ठप्प भएको अवस्था छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मात्र जोगिने विषय नै रहेन । गत चैत मसान्तको… The post लकडाउनले भोकमरी ल्याउन सक्छ, आर्थिक गतिविधि संचालनको बाटो खोजौं :मनोजकुमार केडियाको विचार appeared first on Bizkhabar Online.
बारामा थप ५ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितमध्ये २ जना नेपाली सेना
काठमाडौं । मंगलबार बिहान बारा जिल्लामा थप पाँच जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमितमध्य�
काठमाडौं । मंगलबार बिहान बारा जिल्लामा थप पाँच जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमितमध्ये दुई जना नेपाली सेनामा कार्यरत छन् । पचरौता नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका तीन जना र क्वारेन्टाइनको सुरक्षार्थ खटिएका दुई जना सैनिकमा कोरोना पुष्टि भएको बारास्थित स्रोतले जानकारी दिएको छ । यससँगै बारामा कूल संक्रमितको संख्या ४१ पुगेको छ । The post बारामा थप ५ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितमध्ये २ जना नेपाली सेना appeared first on Bizkhabar Online.
सिटी एक्सप्रेस र केएमई रेमिटान्सबीच सम्झौता, एक हप्ता निशुल्क रकम पठाउन सकिने
काठमाडौं । हङकङको केएमई रेमिटान्स र सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनु�
काठमाडौं । हङकङको केएमई रेमिटान्स र सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार हङकङमा रहेका नेपालीले केएमई रेमिटान्सको सेवा प्रयोग गरि सिटी एक्सप्रेसमार्फत नेपालमा रकम पठाउन सक्नेछन । उक्त रकम नेपालको जुनसुकै बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न र मोबाइल वालेटमा लोड गर्न सकिने छ । उक्त सम्झौतामा सिटी एक्सप्रेसका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डन र केएमईका निर्देशक कबिता गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन । आईतबार एक कार्यक्रमकाबीच हङकङका महाबाणिज्य दूत कमल प्रसाद भट्टराईले उक्त सेवाको उदघाटन गरेका हुन । साथै नेपाल बिप्रेषण पठाउदा १ हप्ता को लागि निशुल्क पठाउने… The post सिटी एक्सप्रेस र केएमई रेमिटान्सबीच सम्झौता, एक हप्ता निशुल्क रकम पठाउन सकिने appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा पुन भाँडभैलो सुरु भएको छ । महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाल�
काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा पुन भाँडभैलो सुरु भएको छ । महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले बाधा अड्काउ फुकाउको एजेण्डा सहित सोमबार २ बजेका लागि डाकेको स्थायी समितिको बैंकठलाई दुई तिहाईभन्दा बढी सदस्यले बहिस्कार गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । राणा नेतृत्वको महासंघले व्यवसायीक हकहितका लागि काम गर्न नसकेको भन्दै बहुमत सदस्यहरुले असन्तुष्टी जाहेर गर्दै आएका थिए । तर, आजको बैंकठमा ब्यवसायीका समस्या समाधानभन्दा पनि आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने गरी एजेण्टा ल्याएपछि स्थायी समितिका १३ जना सदस्यले बैंठक नै बहिस्कार गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए । कुल १९ जनाको स्थायी समिति… The post महासंंघमा सुरु भयो भाँडभैलो, अध्यक्ष भवानी राणाले डाकेको स्थायी समितिको बैंठक दुई तिहाई सदस्यले गरे बहिस्कार appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रका लागि आर्थिक प्याकेज ल्याउने बताएका छन�
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रका लागि आर्थिक प्याकेज ल्याउने बताएका छन् । सोमबार साँझ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न सहुलियत प्याकेज ल्याउने बताएका हुन । यस्ता सुविधामा कर सहुलियत, शुल्क मिनाह, कर्जाको ब्याज सहुलियत, सहज ऋणको उपलब्धता एवं विद्युत लगायतका क्षेत्रमा दिइने छुटहरु पर्नेछन् । निजी क्षेत्र सबल नहुँदा अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको बताउँदै उनले शिथिल बन्न पुगेको अर्थव्यवस्थालाई दुरुस्त गर्न आवश्यक आर्थिक पुनरुत्थानसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले छीट्टै जारी गर्ने उनको भनाई छ । अब नियन्त्रणको… The post प्रधानमन्त्रीले भने–निजी क्षेत्रका लागि राहतको छुट्टै प्याकेज ल्याईनेछ, सम्बोधनको पूर्णपाठसहित appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाल विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ बाट बच्नका लागि ५ नयाँ सुझ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाल विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ बाट बच्नका लागि ५ नयाँ सुझाव दिएका छन् । उनले सोमबार राष्ट्रको नाममा संबोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कारोना भाईरसबाट बच्दै निरोगी नेपाल अभियानका लागि विभिन्न ५ उपाय अबलम्बन गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले यस महामारीसँग लड्दै निरोगी नेपाल निर्माणका आफुलाई तयार राख्न उपलब्ध आहारलाई स्वच्छ र सन्तुलित बनाउन आग्रह गरेका छन् । यसैगरी लकडाउनको समयमा उपलब्ध फुर्सदको समयलाई स्वच्छ रहन र सोही अनुरुप उपयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् । यसैगरी शारिरीक र स्वासप्रश्वास चुस्तताका लागि घरभित्रै व्यामलाई प्राथमिकता… The post राष्ट्रको नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, कोरोना भाइरस रोक्न ल्याए ५ फर्मुला appeared first on Bizkhabar Online.
५ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक, ५:३० मा प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रका नाममा सम्बोधन
काठमाडौं । सोमबार साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा �
काठमाडौं । सोमबार साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आजै साँझ उक्त बैठक बस्ने बताईएको हो । यसका साथै आजै साँझ साढे ५ बजे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्का नाममा सम्बोधन समेत गर्ने भएका छन् । The post ५ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक, ५:३० मा प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रका नाममा सम्बोधन appeared first on Bizkhabar Online.
एनआईसी एशिया बैंक र रिचार्जरबीच सम्झौता, बैंकका ग्राहकलाई कोरोना सुरक्षा सामान खरिदमा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । मोबाइल एप रिचार्जर र एनआईसी एशिया बैंककाबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार कोरोना सुर
काठमाडौं । मोबाइल एप रिचार्जर र एनआईसी एशिया बैंककाबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार कोरोना सुरक्षाका सामग्री रिचार्जरबाट खरिद गर्दा बैंकको क्यू आर कोड, डेविट कार्ड तथा क्रेडिट कार्डबाट रकम भुक्तान गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन । ग्लोबल की टेक्नोलोजी र रिचार्जरकाबीचमा भएको सम्झौता अनुसार मे महिना भरी बैंकका सेवाग्राहीले रिचार्जरको छुटसँगै कोरोना सुरक्षाका सामान किन्दा थप १० प्रतिशत छुट पाउने छन् । रिचार्जरले विश्व बजारको तुलनामा नेपालमा सस्तो मूल्यमा के एन ९५ मास्क उपलब्ध गराउँदै आईरहेको छ । निशुल्क होम डेलिभरी सहित १७५ रुपैंयामा के एन ९५ मास्क… The post एनआईसी एशिया बैंक र रिचार्जरबीच सम्झौता, बैंकका ग्राहकलाई कोरोना सुरक्षा सामान खरिदमा १० प्रतिशत छुट appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । सोमबार थप ७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्
काठमाडौं । सोमबार थप ७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाका अनुसार उक्त संक्रमित पुष्टि भएको हो । उनका अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरी हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ६ सय ८१ पुगेको हो । यसका साथै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि ४ पुगेको छ । हालसम्म १ सय १२ जना नेपालीले कोरोना जितेर घर फर्किसकेका छन् । The post थप ७ जनामा कोराना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमित संख्या ६ सय ८२ पुग्यो appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुगेको छ । सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
काठमाडौं । नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुगेको छ । सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा चौथो व्यक्तिको मृत्यु भएको पुष्टि भएको हो । बाराको करैयामाई गाउँपालिका ७ स्थित उम्जनका ७० वर्षीय वृद्धको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो । वीरगञ्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा उनको जेठ ४ गते मृत्यु भएको थियो । उनको त्यही दिन बारामा लगेर अन्त्येष्टि गरिएको थियो । तर सोमबार विहान उनको कोरोना पोजेटिभ भएको रिपोर्ट आएको छ । यसका साथै नेपालमा कोरोनालाई जित्नेको संख्या पनि १ सय १२ जना पुगेको… The post नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, ११२ जनाले जिते कोरोना appeared first on Bizkhabar Online.
दुईपक्षीय सम्झौता विपरित भारतले नेपालको चिया रोक्यो, के सीमा विवाद कारण हो ?
काठमाडौं । भारतले नेपालबाट चिया आयात रोकेको छ । केही दिनयता भारतले नेपाली चिया आयात रोक्नुुलाई पछ
काठमाडौं । भारतले नेपालबाट चिया आयात रोकेको छ । केही दिनयता भारतले नेपाली चिया आयात रोक्नुुलाई पछिल्लो समय उत्पन्न नेपाल भारत सीमा विवादसंग जोडेर विश्लेषण गरिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयले भारतलाई आयात नरोक्न आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्र पठाउने तयारी गरेकोे मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । अत्यावश्यक सामग्री र कृषिजन्य वस्तुको आयात–निर्यातमा कुनै रोकावट हुने समझदारी भए पनि भारतले नेपालमा उत्पादित चियामा रोक लगाएको हो । उक्त रोक दुई पक्षीय सम्झौता विपरित हो । भारतको यस कदम पछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्रालयलाई पत्र… The post दुईपक्षीय सम्झौता विपरित भारतले नेपालको चिया रोक्यो, के सीमा विवाद कारण हो ? appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । विश्वमा कोरोना महामारीका कारण करीब २३ लाख संक्रमित निको भएका छन् । पछिल्लो तथ्यांकका अ
काठमाडौं । विश्वमा कोरोना महामारीका कारण करीब २३ लाख संक्रमित निको भएका छन् । पछिल्लो तथ्यांकका अनुसार ५४ लाख ९२ हजार बढी संक्रमित मध्ये २२ लाख ९९ हजार उपचार पछि निको भएका छन् । यस्तै संक्रमित मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या ३ लाख ४६ हजार नाघेको छ । ५३ हजार २ सय बढी संक्रमितको अबस्था गंभिर छ भने बाँकीको अवस्था मध्यम रहेको छ । पछिल्लो तत्थ्यांक अनुसार अमेरिकामा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख नजिक पुगेको छ । संक्रमितको संख्या १६ लाख ८५ हजार नाघेको छ । बेलायतमा २… The post कोरोना कहर : विश्वभर कोरोना संक्रमित मध्ये २३ लाख जना निको, ३ लाख ४६ हजार बढीको मृत्यु (अपडेट) appeared first on Bizkhabar Online.
२ सय ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको कोरोना केन्द्रित आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई काँग्रेसको सुझाव, यस्ता छन् अन्य सुझाव
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण पछिको अर्थतन्त्रबारे सुझाब दिन गठित अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण पछिको अर्थतन्त्रबारे सुझाब दिन गठित अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । नेपाली काँग्रेसले गठन गरेको उक्त समितिले आईतबार सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । उक्त प्रतिवेदनले बजेट निर्माण गर्दा कार्यान्वयन क्षमतालाई ध्यान दिनु पर्ने, बजेट निर्माण गर्दा पर्याप्त गृहकार्य गरी कार्यान्वयन क्षमतालाई ध्यानमा राखी व्यावहारिक बनाउनु पर्ने, बजेटको आकार ठूलो बनाएर उपलब्धि नहुने उल्लेख गरेको छ । ६ महिनाको अवधिमा विनियोजित चालू खर्चको ३२ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च भने केवल १५ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख छ । राजस्वको वृद्धि लक्ष्य २८… The post २ सय ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको कोरोना केन्द्रित आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई काँग्रेसको सुझाव, यस्ता छन् अन्य सुझाव appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वेवसाईट ह्याकरले आफ्नो कब्जामा लिएको छ । प्राधिकरणक�
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वेवसाईट ह्याकरले आफ्नो कब्जामा लिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार भारतीय ह्याकरले वेवसाईट ह्याक गरेको भए पनि सम्पूर्ण डाटाहरु सुरक्षित रहेको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार ति ह्याकरहरुले आफ्नो शक्तिको महसुस गराउन ह्याक गरेको बताए । उनले भने, ‘ हिन्दीमा लेखिएको छ, हामीले हाम्रो शक्ति महसुस गराउन ह्याक गरेको हौं ।’ भारतले उक्त वेवसाईट ह्याक गरे पनि केही बेरमै रिकभरी हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ‘हामी पर्खिरहेको छौं केही समयमै रिकभरी हुन्छ’, क्षेत्रीले भने । पछिल्लो समयमा नेपाल र भारतबीच… The post नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वेवसाईट ह्याकरको कब्जामा, डाटा भने सुरक्षित appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । अबदेखि पूर्वराजाको तस्बिर अंकित नोट प्रयोगमा नआउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतब�
काठमाडौं । अबदेखि पूर्वराजाको तस्बिर अंकित नोट प्रयोगमा नआउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार परिपत्र जारी गर्दै यस्ता नोेटहरु प्रयोगका लागि नपठाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकको सफा नोट नीतिअनुसार अबदेखि झुत्रिएको, मक्किएको, जलेको, गलेको, लुलो भएको, पानीले भिजेको, नोटमा रहेको अक्षर, अंक चित्र तथा सुरक्षण विशेषताहरु नबुझिने वा बिग्रने गरी रंग लागेको, लेखिएको, कोरिएको वा च्यातिएका नोटलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनः निष्काशन गर्न मिल्दैन । त्यस्तो नोट पुनः निष्काशनका लागि अयोग्य ठहर गर्नुपर्नेछ । र, त्यस्ता नोटलाई चलनचल्तीमा पठाउन मिल्दैन ।… The post राजाको फोटो अंकित नोट प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन, बैंकले दिने नोटमा अनिवार्य डिसईन्फेक्सन appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । अमेरिकाले ट्रायल स्टेजमा रहेको कोरोना भाईरस विरुद्धको खोप आफ्नो देश लैजान ठुलो रकम खर�
काठमाडौं । अमेरिकाले ट्रायल स्टेजमा रहेको कोरोना भाईरस विरुद्धको खोप आफ्नो देश लैजान ठुलो रकम खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । परिक्षण अवस्थामै रहेको उक्त भ्याक्सिन ३ सय मिलियन डोज अमेरिका लैजान करिव १ दशमलव २ विलियन डलर खर्च गर्ने बताएको हो । वेलायतको औषधि बनाउने कम्पनी अस्ट्राजेनेका र ईंगल्याण्डस्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले परिक्षण गरिरहेको उक्त खोपका लागि अगाडी नै भुक्तानी गर्ने बताएको हो । कोरोना भाईरस विरुद्ध प्रभावकारी मानिएको उक्त खोप आगामी अक्टोबरसम्ममा डेलीभरी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । परिक्षणको पहिलो चरणमै रहेको उक्त खोप यदी बनेन भने त्यो प्रयास… The post कोरोना भ्याक्सिन खरिदमा होडबाजी, ट्रायल पिरियडमै अमेरिकाले बुक गर्यो १.२ विलियन डलरको ३ करोड वटा खोप appeared first on Bizkhabar Online.
आईतबार थप १९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ४२ जिल्लामा ६०३ संक्रमित पुगे
काठमाडौं । आईतबार संक्रमितको संख्या १९ जना रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिराटनगर प्रा�
काठमाडौं । आईतबार संक्रमितको संख्या १९ जना रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिराटनगर प्रादेशिक जनस्वास्थ प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा मोरङका १ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । त्यस्तै बाराका १ जना, पर्साका ३ जना, रौतहट र सर्लाहीका एक एक जना, रुपन्देहीका ३ जना, काठमाडौंका १ जना, नुवाकोटका एक जना रहेको छ । त्यस्तै प्रादेशीक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवामा गरिएको परीक्षणमा रुपन्देहीका थप ३ जना, कपिलवस्तुका ३ जना र गुल्मीका १ जना रहेका छन । संक्रमितहरु सबै पुरुष रहेका छन । उक्त संक्रमितसँगै संक्रमितको संख्या ६०३ जना पुगेको छ भने हालसम्म ४२… The post आईतबार थप १९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ४२ जिल्लामा ६०३ संक्रमित पुगे appeared first on Bizkhabar Online.
व्यवसायीको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै महासंघमा नेतृत्व परिवर्तनको दबाब, सोमबार बस्ने स्थायी समिति बैंठकले टुङ्गो लगाउँदै
काठमाडौं । कोरोना पछिको लकडाउनका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या पर्दा नेतृत्वले काम गर्न नसकेप
काठमाडौं । कोरोना पछिको लकडाउनका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या पर्दा नेतृत्वले काम गर्न नसकेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र नेतृत्व परिवर्तनको विषयले चर्चा पाएको छ । महासंघको विधानत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि २०७५ साल चैत २८ र २९ गते गर्नु पर्ने निर्वाचन कोरोना भाइरसका कारण पछि धकेलिएको थियो । तर सो अवधिमा देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरु समस्या पर्दा पनि नेतृत्वले सरकारसँग वार्ता र सम्बादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न नसकेपछि तत्कालै नेतृत्व परिवर्तनको विषयले चर्चा पाएको हो । हाल महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले व्यवसायीक हकहितका लागि सरकारसँग सम्बाद र वार्ता गरेर समस्या सम्बोधन… The post व्यवसायीको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै महासंघमा नेतृत्व परिवर्तनको दबाब, सोमबार बस्ने स्थायी समिति बैंठकले टुङ्गो लगाउँदै appeared first on Bizkhabar Online.
कोरोना फैलिने क्रम बढ्दो, नुवाकोटमा पहिलो कोरोना संक्रमित भेटिए
काठमाडौं । आईतबार १ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । आईतबार पुष्टि भएका संक्रमितभने नुवाकोट क
काठमाडौं । आईतबार १ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । आईतबार पुष्टि भएका संक्रमितभने नुवाकोट ककनी गाउँपालिका ३ का पुरुष रहेका छन । काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा भएको कोरोना परीक्षणमा ती पुरूषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर लामाले ककनीमा रहेका एक जना पुरूषमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरेका हुन । कोरोना पुष्टि भएका पुरूषले काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी बैठकमा सहभागिता जनाएका थिए । ती पुरूषसँगै बैठकमा सहभागी नुवाकोटकै अन्य केही व्यक्तिको भने कोरोना संक्रमण नदेखिएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । हाल उक्त संक्रमित बिरामीलाई काठमाडौं… The post कोरोना फैलिने क्रम बढ्दो, नुवाकोटमा पहिलो कोरोना संक्रमित भेटिए appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं महानगरले वितरण गर्याे साढे ५ करोड बराबरको राहत, साढे २ लाख घरपरिवार लाभान्वित
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले लकडाउन अवधिभर महानगरका साढे २ लाख घरधुरीलाई राहत वितरण गरेक�
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले लकडाउन अवधिभर महानगरका साढे २ लाख घरधुरीलाई राहत वितरण गरेको छ । लककडाउन सुरु भएको केहीदिन अघिदेखि राहत वितरण गर्न थालेको महानगरपालिकाले हालसम्म उक्त घरधुरीमा वितरण गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार हालसम्म विभिन्न वडा कार्यलयमार्फत झण्डै ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गरिएको हो । उनका अनुसार वडास्तरबाट वितरण गरिएको राहतमा विभिन्न गरिव घरपरिवारदेखि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरु पनि लाभान्वीत भएका छन् । हाल भने काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रत्यक्ष राहत वितरया नगरी विभिन्न श्रममा लगाएर सोही अनुसार को प्रतिदिन राहत… The post काठमाडौं महानगरले वितरण गर्याे साढे ५ करोड बराबरको राहत, साढे २ लाख घरपरिवार लाभान्वित appeared first on Bizkhabar Online.
कोरोना भाइरसको उदगमस्थल चीनको उहानका ल्याब प्रमुखले भने, हाम्रो प्रयोगशालाबाट भाइरस बाहिरिएको छैन
न्यूयोर्क । कोरोना भाइरस इन्स्टिच्यूट अफ भाइरोलोजीबाट बाहिर नगएको इन्स्टिच्यूटका निर्देशक वाङ �
न्यूयोर्क । कोरोना भाइरस इन्स्टिच्यूट अफ भाइरोलोजीबाट बाहिर नगएको इन्स्टिच्यूटका निर्देशक वाङ यीले बताएका छन । विश्वव्यापी महामारी मध्य चीनको उहान इन्स्टिच्यूट अफ भाइरोलोजीबाट प्रारम्भ भएको भन्ने ट्रम्प प्रशासनको दाबी ‘पूर्णतः बनावटी र मनगढन्ते’ रहेको निर्देशकले दाबीसमेत गरेका छन । निर्देशक वाङ यीले आइतबार राज्यसंचालित संचारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने, ‘इन्स्टिच्यूटलाई यो भाइरसबारे यसअघि न त कुनै ज्ञान थियो न हामीले सामना गरेका थियौं, न अनुसन्धान गरिएको वा यो भाइरस हामीले राखेका थियौं । हामीलाई भाइरसको अस्तित्वको बारेमा पनि थाहा थिएन । हामीसँगै हुँदै नभएको कुरा कसरी हाम्रो ल्याबबाट बाहिरियो ?’… The post कोरोना भाइरसको उदगमस्थल चीनको उहानका ल्याब प्रमुखले भने, हाम्रो प्रयोगशालाबाट भाइरस बाहिरिएको छैन appeared first on Bizkhabar Online.
काठमाडौं । चीनबाट हरेक साता नेपालका लागि मालवहाक रेल सञ्चालनमा आउने भएको छ । चीनको पल्लो सान्सी प�
काठमाडौं । चीनबाट हरेक साता नेपालका लागि मालवहाक रेल सञ्चालनमा आउने भएको छ । चीनको पल्लो सान्सी प्रान्तको सिआनदेखी काठमाडौंसम्म हरेक साता मालवहाक रेल सञ्चालन हुने भएको हो । सियानबाट हप्तामा एक पटक कार्गो रेल पठाउने तयारी भएको सियान अन्तर्रा्ष्ट्रिय लजिस्टिक सेन्टरिक पार्कले जनाएको छ । सिआनदेखी काठमाडौंसम्मका लागि रेलसेवा सुरु भइसकेको छ । सिआन र अन्य क्षेत्रबीच कार्गो रेल संचालन भएपनि काठमाडौंसम्म भने पहिलो पटक कार्गो रेल सुरु भएको हो । शुक्रवार हिंडेको रेल तिब्बतको सिगात्सेसम्म आउनेछ । त्यहांबाट सडकमार्ग हुंदै सामाग्री मालबाहक ट्रकमा काठमाडौं ल्याउने तयारी छ ।… The post अब हरेक साता चीनबाट नेपालका लागि छुटने छ रेल, कलकत्ताबाट भन्दा ३५ दिन छिटो सामान आइपुग्ने appeared first on Bizkhabar Online.
इसेवा मनि ट्रान्सफरले शुरु गर्यो प्रथम अन्तरराष्ट्रिय ‘वालेट टु वालेट रेमिट्यान्स्’ सेवा, मलेसियाबाट कारोबार सुरु
काठमाडौं । इसेवा मनि ट्रान्सफरले मलेसियाबाट पनि रेमिट्यान्स् कारोबार सुरु गरेको छ । यसअघि जापान�
काठमाडौं । इसेवा मनि ट्रान्सफरले मलेसियाबाट पनि रेमिट्यान्स् कारोबार सुरु गरेको छ । यसअघि जापानबाट रेमिट्यान्स् कारोबार सुरु गरेको इसेवा मनि ट्रान्सफरले मलेसियामा पनि आफ्नो सेवा विस्तार गरेको हो । मलेसियाको भ्याल्यु कम्पनीसँगको सहकार्यमा रेमिट्यान्स् कारोबार सुरु गरिएकोे हो । मलेसियामा रहेका नेपालीहरुले भ्याल्युका एजेन्टका अलावा सिधै भ्याल्युको वालेटबाट नेपालको इसेवा वालेट तथा कुनै पनि बैंक खातामा समेत रेमिट्यान्स् पठाउन सक्नेछन् । इसेवा मनि ट्रान्सफरले रेमिट्यान्स् क्षेत्रमा पहिलो पटक वालेट टु वालेट रेमिट्यान्स् पठाउन सकिने सेवा दिएको हो । इसेवा मनि ट्रान्सफरले मलेसियाबाट सेवा सुरु गरेसँगै मलेसियामा रहेका नेपालीलाई नेपालमा… The post इसेवा मनि ट्रान्सफरले शुरु गर्यो प्रथम अन्तरराष्ट्रिय ‘वालेट टु वालेट रेमिट्यान्स्’ सेवा, मलेसियाबाट कारोबार सुरु appeared first on Bizkhabar Online.
सिटी एक्सप्रेसले गर्यो आफ्ना सबै कर्मचारीको कोभिड बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर दैनिक सेवा प्रदान गर्दै
काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले आफ्नो सम्पुर्ण कर्मचारीहरुको कोभिड बीमा गरेको छ । कम्�
काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले आफ्नो सम्पुर्ण कर्मचारीहरुको कोभिड बीमा गरेको छ । कम्पनीले विप्रेषण सेवा अत्यन्त जरुरी भएको र निरन्तर सेवा प्रदान गर्नु परेको अवस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण कर्मचारीको कोरोना बीमा गरेको हो । हाल कम्पनीले कोभिड सुरक्षा विधी अपनाएर दैनिक काम गर्दै आईरहेको छ । लकडाउनको बेला सबै सिटी एक्सप्रेसका कर्मचारीहरुले घरमै बसेर आफ्नो कामहरु गरिरहेका छन् । तर, विप्रेषण सेवा अत्यावश्यक सेवा अन्तरगत पर्ने भएकाले कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार आवश्यक कर्मचारीहरुमार्फत कार्यालयबाट विप्रेषण सेवा प्रदान गरिरहेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिको सामना गर्दै निरन्तर सेवामा… The post सिटी एक्सप्रेसले गर्यो आफ्ना सबै कर्मचारीको कोभिड बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर दैनिक सेवा प्रदान गर्दै appeared first on Bizkhabar Online.